သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်သို့မဟုတ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေရေးများအတွက်အဆင်သင့်ရယူခြင်း | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း
သင်ပြုသင့်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအရာကိုသင်တိုအလုပ်ကျွမ်းကျင်မှုစဉ်းစား start ဖြစ်ပါသည်. အလုပ်နှင့်လှုပ်ရှားမှုများအဘယျသို့သောသင်သည်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေရေးအတွက်သင်ကူညီနိုငျသောအတိတ်ကာလပြုကြပြီ? Can the certifications you have be used in the USA? ဤသည်မှာယခုသင်တို့ရှာတွေ့အများဆုံးအောင်မြင်မှုရှိစေခြင်းငှါအလုပ်အကိုင်အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုကိုသိကူညီပေးပါမည်.
အတူတူသင်သည်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေရေးဘို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုစုဝေးစေနှင့်ချရေး. You will use this information to fill out job applications, နှင့် write cover letters, နှင့် သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်.
အလုပ်၏အဘယျသို့သောသင်သည်အတိတ်ကာလ၌ပြစ်မှားမိပါပြီ? သငျသညျအလုပ်ကျွမ်းကျင်မှု၏အဘယျသို့သောရှိဘူး? ဤမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်းသင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဘို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်အလုပ်အကိုင်အဘယ်အရာကို type ကိုသိပါကကူညီကြလိမ့်မည်. ဥပမာ, သငျသညျအတိတ်ကာလတစ်စက်ပြင်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့လျှင်, သငျသညျတဖနျစက်ပြင်အဖြစ်အလုပ်ရှာတွေ့နိုင်မည်အကြောင်း. သငျသညျဆေးပညာအလုပ်လုပ်ခဲ့ အကယ်., သင်တစ်ဦးလက်မှတ်ရဖို့သို့မဟုတ်နောက်ကျောကျောင်းကိုသွားစဉ်းစားဖို့ဘယ်လိုလေ့လာဖို့လိုပမေ.
သငျသညျရှိသင့်ရဲ့အတိတ်အလုပ်အကိုင်များနှင့်မည်သည့်အလုပ်အတွေ့အကြုံ၏အားလုံးရေးချ. သငျသညျပွုပါပွီတစ်ခုချင်းစီကိုအလုပ်အဘို့အအချက်အလက်များ၏စာရင်းကို Make, အပါအဝင်:
သငျသညျအလုပျ left အဘယ်ကြောင့်
သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုသင်ကောင်းသောအမှုကိုပြုဘာမှများမှာ. ဥပမာ, သငျသညျတစ်ခုထက် ပို. ဘာသာစကားမပြောတတ်လျှင်, သောအလုပ်ခွင်ထဲမှာအရေးပါတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဖြစ်ပါတယ်. သင်သည်သင်၏အလုပ်အကြောင်းစဉ်းစားနေလျှင် ကျွမ်းကျင်မှု အဖြစ် အမျိုးအစားများ သငျသညျရှိခဲ့အလုပ်အကိုင်, သင်ကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်ဖျောပွနိုငျသောကွောငျ့သငျသညျအလုပ်အကိုင်အသစ်သောအမျိုးအစားများကိုများအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်.
အချိန်မှန်, ဖော်ရွေဖြစ်ခြင်း, အခြားလူများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်း, being able to work safely and
accurately, ထရပ်ကားကိုမောင်း, တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများကိုပွငျဆငျသို့မဟုတ်ဆော့ဖ်ဝဲကို operate. These types of skills are
နောက်တဖန်တစ်စက်ပြင်စဉျးစားကွညျ့: စက်ပြင်တိကျစွာတိုင်းတာနှင့်လုံခြုံစိတ်ချစွာ tools တွေကိုသုံးပြီးများ၏ကျွမ်းကျင်မှုရှိပါတယ်. ဤရွေ့ကားကတခြားအလုပ်အကိုင်တွေအတွက်လိုအပ်လျက်ရှိသောအလုပ်ကျွမ်းကျင်မှုများမှာ, လွန်း. ဥပမာ, သငျသညျဆောက်လုပ်ရေးတွင်ဤအလုပ်ကျွမ်းကျင်မှုကိုသုံးပါနှင့်ပင်ချက်ပြုတ်နိုင်ပါတယ်.
သင်သည်သင်၏ပညာရေးနောက်ခံအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. ဒါဟာသင်တက်ရောက်ခဲ့သည်ကျောင်းများ၏အမည်များနှင့်တည်နေရာများပါဝင်သည်, ရက်စွဲများစတင်ပြီးစီး, သငျသညျဘွဲ့ရရှိမရှိ, သငျတို့သပြုကြပြီဆိုမှအထူးလေ့ကျင့်ရေး.
သင့်ရဲ့ဇာတိနိုင်ငံအတွင်းရှိအဆိုပါပညာရေးစနစ်ကအမေရိကန်အတွက်တဦးတည်းအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါသည်. ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများအထက်တန်းကျောင်းဖြည့်စွက်ရန်အဆင့်၏ကွဲပြားခြားနားသောနံပါတ်များကိုရှိ, ဥပမာ. အဆိုပါတက္ကသိုလ်ပညာရေးစနစ်သင်ဒီမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်တွေထက်အောင်မြင်မှု၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဆင့်ရှိစေခြင်းငှါ. တခါတရံသငျသညျဇာတိဖွားအမေရိကန်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေကြဘို့ဒီဇိုင်းဖြစ်ကြောင်းစာရွက်စာတမ်းများသို့သင်၏အချက်အလက်များကို "fit" ကိုရပါလိမ့်မယ်.
You might have gone toaschool that was famous or hard to get into. Make sure to write that under the school’s name on the resume. သင်တို့ကဲ့သို့တစ်ခုခုပြောနိုင်, "ဖိလစ်ပိုင်အဆိုပါနည်းပညာတက္ကသိုလ် Institute မှတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးကျောင်းတွေထဲကတစ်ခုစဉ်းစားသည်။ "
သငျသညျအထက်တန်းကျောင်းပြီးအောင်သို့မဟုတ်ကောလိပ်မှမသွားဘဲရင်တောင်, သင်သည်သင်၏အတိတ်ပညာရေးစာရင်းပြုစုတဲ့အခါမှာသင်ပြီးစီးခဲ့ပါပြီအခြားမည်သည့်လေ့ကျင့်ရေးတို့ပါဝင်သည်သင့်တယ်. ဥပမာ, များစွာသောဒုက္ခသည်များစခန်းထဲမှာခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်းများသို့မဟုတ်အသိုင်းအဝိုင်းကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ရေးယူသို့မဟုတ်ပြန်လည်နေရာချထားရေးပြီးနောက်ပါပြီ. သင်ယူကြပြီဆိုလေ့ကျင့်ရေးရေးချသင့်တယ်.
သင်တို့ကိုလည်းမပြောတတ်တိုင်းဘာသာစကားရေးချဖို့သေချာပါစေ. Your ability to speak more than one language can beavery important skill during your career search.
သင်သည်သင်၏ဒီဂရီအားဖြင့်အကဲဖြတ်ရှိခြင်းစဉ်းစားရန်လိုပေမည် ကမ္ဘာ့ဖလားပညာရေးန်ဆောင်မှုများ. ဒါဟာသင့်ရဲ့အတိတ်ပညာရေးကိုကြည့်လိမ့်မည်ဟုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအမေရိကရှိဆင်တူသည်အဘယ်အရာကိုရှင်းပြပါဦးမည်. ဒီဝန်ဆောင်မှုတခါတရံစျေးကြီးရှိနိုင်ပါသည်. Most employers will not ask for an evaluation. It is best to wait until you learn if this is common for the jobs you are looking for.
သင်သည်သင်၏အဆက်အသွယ်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးသိရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်, သင်ပထမဦးဆုံးကို format ဖို့ဘယ်လိုအပါအဝင်, အလယ်တန်းနှင့်နောက်ဆုံး အမည်များ ပလီကေးရှင်း, သင့်ရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်, လိပ်စာ, နှင့် အီးမေးလိပ်စာ. သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အတွက်, သငျသညျထိုကဲ့သို့သောမွေးသင့်ရဲ့နေ့စွဲအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်, အသက်အရွယ်, သို့မဟုတ်အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေ. You might need to share that information in applications.
သင်က US မှာအလုပ်လုပ်ရန်သင့်ရထိုက်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. ဒါဟာသင်တရားဝင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားသကျသပွေရန်ရှိသည်ဆိုလိုတယ်. သင်သည်သင်၏အလုပ်ရှင်ရန်သင့်လူမှုလုံခြုံရေးနံပါတ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်. သင်တို့သည်လည်းသင်တို့ကို US မှာမဆိုပြစ်မှုကျူးလွန်ကြပြီမဟုတ်တစ်နောက်ခံစစ်ဆေးမှုများဖြည့်စွက်ရန်ရှိသည်နှင့်သင့်အလုပ်ရှင်ကမှသက်သေပြစေခြင်းငှါ.
အဘယ်အရာကိုရက်ပေါင်းရေးချ, နာရီ, သငျသညျအလုပ်မလုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိကြပြီးကြိမ်. ဥပမာ, သငျသညျညအချိန်တွင်အလုပ်လုပ်နိုင်? သင်တနင်္ဂနွေအလုပ်လုပ်နိုင်သလား? သငျသညျဖို့လိုအပျပါလျှင်, သငျသညျအလုပျအတှကျခရီးသှားဖို့လိုလိုလားလားရှိ?
Professional ကညွှန်းဆိုသငျသညျအကောင်းတစ်ဦးအလုပ်သမားများမှာပြောပါလိမ့်မယ်သူကလူမျိုးဖြစ်ကြ၏. US မှာ, သင့်ရဲ့အလုပ်ကိုးကားများသောအားဖြင့်သင်သည်အတိတ်ကာလနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့သို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်ပါပြီလူမျိုးဖြစ်ကြ၏. သင်ပထမဦးဆုံးရောက်ရှိသည့်အခါဒါဟာကိုးကားထောက်ပံ့ဖို့ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်. Maybe most or all of your past job references are in another country. သင့်ရဲ့ရည်ညွှန်းနှင့်သင့်အလုပ်ရှင်တူညီတဲ့ဘာသာစကားကိုပြောဆိုနိုင်လျှင်သင်တစ်ဦးရေခြားမြေခြားကိုကိုးကားသုံးနိုငျ. သင့်ရဲ့ရည်ညွှန်းအင်္ဂလိပ်ပြောတတ်နှင့်သင့်အလုပ်ရှင်အင်္ဂလိပ်ပြောတတ်ပါလျှင်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့နှစ်ဦးစလုံးဆိုမာလီမပြောတတ်လျှင်, သင်တစ်ဦးကိုကိုးကားအဖြစ်ကသူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့နိုင်မည်အကြောင်း.
သင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်အပြင်ဘက်အမေရိကန်၏နထေိုငျသောအလုပ်တစ်ခုရည်ညွှန်းကိုလက်ခံစေခြင်းငှါ,. ဒါပေမယ့်အလုပ်ဘို့သင့်ကိုအကြံပြုနိုင်သူကိုအမေရိကန်ကလူတွေရှိသည်ဖို့သင်ကူညီကြလိမ့်မည် - ဥပမာ, သငျသညျလုပ်အားပေးအနေဖြင့်သိကြတစ်စုံတစ်ဦးက. သငျသညျမည်သူမျှရှိပါက, သင်သည်သင်၏ရည်ညွှန်းဖြစ်မယ့်ကိစ္စမန်နေဂျာသို့မဟုတ်ဆရာမေးနိုငျ. အများအားဖြင့်, သငျသညျအလုပျအတှကျအလုပ်ရည်ညွှန်းချက်များအဖြစ်မိတ်ဆွေများကသို့မဟုတ်မိသားစုကိုမသုံးလို့ရပါတယ်.
သင်တစ်ဦးကိုကိုးကားအသုံးပြုသောသူမည်သည်ကား,, သင်သည်သူတို့၏အမည်အပြည့်အစုံပေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်, အလုပ်အကိုင်အမည်, အလုပ်ရှင်, ဖုန်းနံပါတ်နှင့်အီးမေးလ်လိပ်စာကို. သင်တို့သည်လည်းထိုသူတို့နှင့်သင်၏ဆက်ဆံရေးပြောရပါလိမ့်မယ်. You can findatemplate for your references on our website. သင့်ကိုယ်ပိုင်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူ template ကိုပေါ်တွင်သင်ရှာတွေ့သတင်းအချက်အလက်များကိုအစားထိုးဖို့သတိရပါ. သငျသညျနည်းပါးလာကိုးကားလိုအပ်လျှင် template ကိုအပေါ်လည်းမရှိထက်, သင်မလိုအပ်ပါဘူးသူတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်.
သငျသညျဤအသင့်ရဲ့ညွှန်းဆိုပေးဒါမှမဟုတ်သင်အလုပ်အကိုင်များကိုကူညီရှာဖွေစေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်လူတို့နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဆိုလိုတယ်တဲ့ professional ကွန်ယက်ကိုတည်ဆောက်အရေးကြီးသည်က. သင်ပထမဦးဆုံးအလုပ်အတွက်, ဥပမာ, get to know the people who work with you when you can.
You can attend job fairs in your community. ကုမ္ပဏီများမကြာခဏသူတို့ရှိသည်အလုပ်အကိုင်အဖွင့်အကြောင်းကိုသင်ပြောပြနိုင်မည့်ဖြစ်ရပ်များကိုကိုင်ထား, သူတို့အဘို့ရှာကြသည်ဝန်ထမ်းများ၏ကြင်နာ, သငျတို့သလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်ဘယ်လို. အလုပ်တစ်ခုမျှတသွားသည့်အခါ, သင်နှင့်သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်၏မိတ္တူများယူဆောင်လာသေချာအောင်. သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်ကုမ္ပဏီကြီးများ၏ကိုယ်စားလှယ်မှကိုယ့်ကိုကိုယ်မိတ်ဆက်, သင်တို့အဘို့ရှာကြသည်အလုပ်အမျိုးအစားကိုရှင်းပြ, သူတို့ကိုသင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုပေး.
အွန်လိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေး tools တွေကို sign up ပြုလုပ်ပါ
အလုပ်ရှာဖွေရေးကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာတစ်ပရိုဖိုင်းကိုဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်အွန်လိုင်းတဲ့ professional ရှိနေခြင်း Create. သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေရေးများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံး tools များပါဝင်သည် LinkedIn တို့, CareerBuilder, တကယ်ပါပဲ, မှန်တံခါး, ZipRecruiter, နှင့် Idealist.
အချိန်ရှိရင်, ဒေသခံတစ်ဦးအဖွဲ့အစည်းကမှာစေတနာ့ဝန်ထမ်း. သငျသညျတခြားသူတွေကိုကူညီနေချိန်တွင်သင်သည်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုအသုံးပြုဖို့သို့မဟုတ်သစ်တွေဖွံ့ဖြိုးနိုင်ပါလိမ့်မည်. သငျသညျရဖို့ကျွမ်းကျင်မှုသင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေရေး၌သင်တို့ကိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည်, သငျတို့သအမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည်. သင်တစ်ဦးအလုပ်ရည်ညွှန်းလိုအပ်သည့်အခါသင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့ကိုယ်စားစကားပြောဖို့နိုင်ပါလိမ့်မယ်သူကိုအဆက်အသွယ်ဖန်တီးပါလိမ့်မယ်.
သင့်အနေဖြင့်လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ဧရိယာ၌ networking ဖြစ်ရပ်များကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည် Facebook ကဖြစ်ရပ်များစာမျက်နှာ, စစ်ဆေးနေ LinkedIn တို့ လာမည့်ကွန်ယက်အခွင့်အလမ်းများကိုများအတွက်, သို့မဟုတ်ပေါ်တွင်နောက်ဆုံးသတင်းများတက်သည်လက်မှတ်ထိုး Eventbrite နှင့် Meetup.